Hetsika miady amin’ny hosoka sy hala-bato Miroso amin’ny dingana ambony kokoa
Araka ny efa tapaka tamin’ny fikaonandoha lehibe tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ny 15 jona teo dia ny « Hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny hosoka sy ny hala-bato »,
dia raikitra ny fanaterana ny fehin-kevitra any amin’ireo andrim-panjakana samihafa sy ny governemanta ary ireo masoivoho vahiny. Omaly dia teny amin’ny Antenimierandoholona no nanateran’izy ireo ilay fehin-kevitra. Ny Filoha lefitry ny Antenimierandoholona avy amin’ny Faritanin’i Toamasina Atoa Malo Benoit no nisolo tena ny Filoha Rivo Rakotovao no nandray azy ireo tamin’izany. Nambaran’Andriamatoa Rakotonirina Jean Claude Roger isan’ireo mpitarika ny hetsika, fa tsy tokony hirosoana ny fifidianana manaraka eo raha tsy voahitsy ny lalàna mifehy ny fifidianana, mba hanatsarana ny vokatra. Miisa 7 moa ireo fepetra sy fangatahana voarakitra ao anatin’io fehin-kevitra io, ka isan’izany ny fanoloana na fanofana ny mpikambana ao anatin’ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana na ny CENI, ny fanadiovana manokana ny lisi-pifidianana,… ka raha tsy tanteraka izany dia tsy tokony hisy fifidianana azo atao eto Madagsikara, raha ny hevitr’ireo vovonana politika, kandida depiote teo aloha, fikambanana, olom-pirenena,… mivondrona ao anatin’io hetsika io.